Ulwazi oluphambili lwe-leuprorelin acetate side effect, umthamo
1. Yintoni i-leuprorelin acetate?
2. Isicelo seLeuprolide acetate
3. I-leuprolide acetate isebenza njani
4. Uyisebenzisa njani i-leuprorelin acetate?
5. I-Leuprorelin acetate Dosage kunye ne-leuprorelin acetate Administration
6. Isiphumo secala leuprorelin acetate
I-Leuprorelin acetate luhlobo lwepeptide esetyenziswa kunye namanye amayeza ukunyanga umhlaza wesifo sokudumba kwamadoda. Nangona kunjalo, ayisiyisi isifo kodwa ukusithintela ekusasazeni kwaye incede ekuphembeleleni kwisiphumo somhlaza webala lobuhlungu emzimbeni wakho. I-Leuprorelin ithengiswa e-United States yaseMelika phantsi kwegama lophron, kwaye inokufumaneka kumazwe ahlukeneyo phantsi kwegama lohlobo olunye.
Uninzi lweentlobo zomhlaza we-Prostate zixhomekeka kumahomoni e testosterone ukukhula nokukhula emzimbeni wakho. Nangona kunjalo, iLeuprorelin acetate powder isebenza ngokunyanzela ukuveliswa kwehormone ye-testosterone eyenza kube lula ukunciphisa isantya sokukhula kweeseli zomhlaza wesibindi kunye nokunciphisa iintlungu okanye ubunzima abahlangabezana nabo kwizigulana ngelixa uchama.
Kwelinye icala, iLupron isetyenziswa ngabafazi ukunyanga iimpawu ze-endometriosis, ezaziwa njenge-uterine fibroids. I-Leuprolide acetate kunye nokukhulelwa yinkxalabo enkulu kubasetyhini, musa ukuthatha eli chiza ukuba ulindele ukuba nomntwana kodwa unokuxoxa nodokotela wakho. I-Lupron sisiyobisi esinokuchaphazeleka ekufuneka singene kwimisipha rhoqo kwiinyanga ze-1-6. Ngalo lonke ixesha qinisekisa ukuba uthatha umthamo kugqirha wakho, kodwa unokuqeqeshwa ukuba ungazifaka njani na kwi-dosage management kwikhaya lakho.
I-Leuprolide acetate yokuthenga ifumaneka ngokulula kuzo zombini iikhemputha eziku-intanethi nezomzimba. Indleko ye-leuprolide acetate ngamanye amaxesha iyahlukahluka kuxhomekeka kwindawo oyithengayo. Nangona kunjalo, kusoloko kucetyiswa ukufumana ichaphaza elifanelekileyo kugqirha. Khumbula ukusela kakhulu okanye ukusebenzisa kakubi i-leuprorelin acetate kungakhokelela kwiziphumo ezibi kakhulu, kwaye kuya kufuneka uyiphephe ukuyithatha ungakhange uxilongwe ngugqirha. Umhlaza sisifo esiqatha, kwaye akufuneki ubeke emngciphekweni ukuthatha amayeza akhe ngokwenzekile. Thetha ugqirha wakho ngolwazi oluthe kratya malunga leuprorelin acetate powder umthamo.
I-Leuprolide acetate powder yi-gonadotropin-ekhupha i-hormone receptor (GnRHR) agonist, kwaye ingqine ibalulekile kwizicelo ezahlukeneyo zeklinikhi. Umzekelo, kunyango lwe-uterine fibroids, umhlaza wesibindi, ukuzala okungumbala (imeko ekhokelela kubantwana ukuba bafike ngaphambi kwexesha kunokuba bekulindelwe), kunye ne-endometriosis. Kuzo zonke ezi meko zempilo, i-leuprolide ingasetyenziswa yodwa okanye kunye nezinye iziyobisi. Eli chiza linokusetyenziswa kunye namanye amayeza ukunyanga i-anemia, ebangelwa zizibeleko ze-uterine.
The I-leuprorelin acetate dosage kufuneka igonyelwe emzimbeni wakho ngezihlunu. Sebenzisa isirinji ye-insulin ye-U-100 ukulawula idosi yakho kunye nokuqinisekisa ukuba usebenzisa iisirinji ezinikezwe ngumvelisi. Kwimeko apho kufuneka usebenzise isirinji eyahlukileyo, sebenzisa i-0.5-mL kuphela enokulahlwa. Khumbula ukuba i-leuprorelin acetate powder kufuneka ixutywe njengoko kuchaziwe ngumenzi ngaphambi kokusetyenziswa. Ukuhambisa isisombululo kusenokungakunikisi ngomxube owaneleyo. Ukudibana kwe-Leuprolide kuya kukunceda ufezekise iziphumo ozifunayo kodwa uhlala ufumana kugqirha wakho.
3. Isebenza njani leuprolide acetate?
Indlela ye-leuprorelin acetate yesenzo ixhomekeke kwimeko yezempilo ephantsi konyango. Umzekelo, xa usetyenziselwa unyango lomhlaza weprostate, yehlisa imveliso yehomoni ye-testosterone, enceda ukukhula nokukhula kweeseli zomhlaza. Nangona iLeuprorelin Acetate powder (74381-53-6) ukusetyenziswa kunganyangi umhlaza webala, kuyanceda ukunciphisa iintlungu nokukhula kweeseli zomhlaza emzimbeni wakho. Nangona kunjalo, ichiza linokuthi lithathwe lodwa, kodwa oogqirha bancomela ukuba ulithathe kunye namanye amayeza omhlaza wesifo se-Prostate ukuze ufumane iziphumo ezingcono.
Nangona iyeza alamkelwanga ukuba lisetyenziswe kubafazi kwamanye amazwe, ibonakalisile ukuba iyasebenza kunyango lwe-endometriosis. Apha, ichiza lisebenza ngokucinezela ukuveliswa kwe-estrogen emzimbeni wakho, eyaziwa ngokuba "kukuhlinzwa kwe-estrogen." Apha, inkqubo yeLeuprorelin acetate yesenzo igxile kakhulu ekunciphiseni i-estrogen, i-hormone enoxanduva lwamaxesha akho. Xa uqala ukuthatha umthamo we-leuprorelin acetate, amanqanaba e-estrogen aya kunyuka kwiiveki ezimbalwa zokuqala, emva koko amanqanaba e-estrogen aya kuhla. Le nkqubo inokuphelisa okwethutyana, kwaye ngenxa yoko, iimpawu ze-endometriosis ziya kukhululeka.
Umhlaza webele weLeuprorelin acetate, kwelinye icala, unceda ekulweni nesifo esibulalayo kubafazi. Nangona i-progesterone kunye ne-estrogen ingeyona nto ibangela umhlaza wamabele, badlala indima ebalulekileyo ekuncedeni ukukhula kwabo kunye nokusasazeka. Ukuveliswa kwala mahomoni mabini kunokupheliswa ngayo yinkqubo yoqhaqho lokususa ii-ovari okanye inkqubo yonyango.
I-hormone ye-luteinizing eveliswa yi-pituitary gland, ibangela ukuveliswa kweprogesterone kunye ne-estrogen ngama-ovari. Ukusetyenziswa kwe-leuprorelin acetate kuyacinezela ukuveliswa kwehomoni ye-luteinizing, ngaloo ndlela kuncitshiswa amanqanaba e-estrogen kunye neprogesterone emzimbeni wakho. Oko kuthetha ukuba ukukhula kweeseli zomhlaza kunye nokusasazeka kuya kuncipha, okwenza kube lula ukuba umhlaza wamabele ulawulwe.
Ulawulo lwe-leuprorelin acetate lunokwenziwa ngeendlela ezimbini eziphambili ngokwenza inaliti ngqo okanye umgubo, odla ngokwakhiwa ngokutsha ngesinyibilikisi ngaphambi kokuthatha idosi. Oogqirha ngabona bantu balunge kakhulu ukuba baphathe iinkqubo zethu zombini, kodwa xa uqeqeshiwe, unokukwenza ngokulula ekhaya.
(1) Inaliti ye-leuprorelin acetate
Inaliti ye-leuprorelin acetate lide unyango olusebenza ngaphakathi olwaluchaphazeleko ngaphakathi kwaye kufuneka lunikwe ngugqirha. Inaliti inikwa kakhulu kanye ngenyanga okanye kube kanye nge-3, 4, okanye i-6 iinyanga ngokuxhomekeka kwimeko yakho. Kwelinye icala, inaliti ye-leuprorelin acetate ngamanye amaxesha inokunikwa njengokumiswa okuhlala ixesha elide okwaziwa njenge (Eligard) egxunyekwe kwimisipha yakho rhoqo kwi-1, 3, 4, okanye i-6.
Emva kovavanyo lonyango, ugqirha wakho uya kukucebisa ngokufanelekileyo kunye nokukunika eyona dosage ye-peptide powder efanelekileyo. Ixesha oza kuthatha umjikelo wakho wethamo liya kugqitywa ngugqirha wakho emva kokuvavanya imeko yakho. Inaliti zihlala zihluka ukusuka kwisigulana ukuya kwesinye.
Ngamanye amaxesha unokuthatha isigqibo sokusebenzisa i-leuprorelin powder, ekwayindlela yokusetyenziswa kwesiyobisi esinamandla okulwa neemeko ezahlukeneyo zempilo, njengoko kuchaziwe ngaphambili. Nangona kunjalo i-Leuprorelin acetate powder kufuneka ilungiswe kakuhle okanye iphinde yenziwe ngaphambi kokuba ifakwe emzimbeni wakho. Umgubo kufuneka uhlolwe kwaye akufanelanga usebenzise isirinji engcolisekileyo. Xa ulungiselela i-leuprorelin acetate, sebenzisa i-diluent enikezwe ngumenzi weziyobisi. Skrolela iplagi emhlophe kwindawo yokumisa de iqale ukujika, qiniseka ukuba ubambe isirinji emile. Ngoku khupha i-dionent ngokutyhala i-plunger ngokuthe chu kangangemizuzwana ye-8 kude kufike i topper ifikelele kumgca oluhlaza okwesibhakabhaka embindini womgqomo. Lonke eli xesha gcina isirinji ithe tye.
Kancinci xuba umgubo ukuqinisekisa ukuba ubumba ukumiswa okune-milky efanayo. Kwimeko apho amasuntswana omgubo enganyamalalanga ngokupheleleyo kwisisombululo, cofa isirinji de onke amasuntswana anyibilike ngokupheleleyo. Musa ukuthatha ithamo ukuba Leuprorelin Acetate ipoda (74381-53-6) ayikunqunyanyiswa ngokupheleleyo. Emva kokuphinda yakhiwe, thatha umthamo wakho ngokukhawuleza kuba ukumiswa kuzinziswa ngaphakathi ixesha elifutshane kakhulu. Kwakhona, musa ukuthatha nakuphi na ukunqunyanyiswa okungasetyenziswanga kwiiyure ezimbini emva kokuphinda kwakhiwe ngenxa yokuba kungenako ukugcina izinto kwaye kunokuba yingozi kwimpilo yakho.
Ulawulo lwe-acetate ye-Leuprorelin kuphela nangona ulusu, kwaye kufuneka usoloko ufumane idosi yakho kwingcali yezonyango ukuze ufumane iziphumo ezingcono. Kangangokuba ukrokrela ukuba unemeko enokunyangwa yile peptide yomgubo, ungaze uyithenge kwaye uqale ukuyithatha ungakhange uyivavanye. Abavelisi be-leuprolide ye-acetate inokubonisa umthamo wechiza kwimiyalelo yokusebenzisa, kodwa loo nto inokungasebenzi kuwe.
Imizimba yabantu yahlukile, kwaye ezinye iidosi zinokuphakama kakhulu ukukuveza kwimiphumo emibi ye-leuprolide ye-acetate okanye iphantsi kakhulu ukusilela ukuzisa iziphumo ezifunwayo. Iidosi ze-Leuprolide acetate ziyahluka ukusuka komnye umntu ukuya komnye, kwaye nazo zimiselwe yimeko yokuphathwa kunye nobudala bomsebenzisi. I-Leuprolide acetate sisiyobisi ekufuneka sithathwe phantsi kwesikhokelo sikagqirha kuba kunokuba yingozi xa sisetyenziswe gwenxa okanye sigqithe kakhulu. Nazi ezinye zethamo leuprolide acetate eyahlukileyo yeemeko ezahlukeneyo zempilo;
I-dosage yabantu abadala leuprorelin acetate yomhlaza we-Prostate
Nazi iindlela ezahlukeneyo ezinokuthi zidideke, kodwa ugqirha wakho uza kukhetha eyona ilungileyo. Iidosi zezi zilandelayo;
1mg inaliti kanye ngemini
I-5mg inaliti ye-intramuscular ekufuneka ithathwe kanye ngenyanga.
Unokuya nakwi-22.5 mg oya kuyithatha kube kanye kwiinyanga ezintathu.
Kukho nomthamo we-30mg wethamo lokuthathwa kanye kwiinyanga ezine.
I-45mg inaliti yemithambo oya kuyithatha kube kanye kwiinyanga ezintandathu.
Unokuthatha isigqibo sokuyokufakwa kwi-65mg subcutaneous implant enokutshintsha kancinci kuba uya kuthatha kuphela umthamo kanye ngeenyanga ze-12 okanye ngonyaka.
I-Adult leuprorelin acetate ipoyinti yedosi ye-Endometriosis
Unyango olucetyiswayo kwizigulana ze-endometriosis yi-3.75mg, ekufuneka ilonywe kube kanye ngenyanga kangangeenyanga ezintandathu. Kukho enye inketho apho ugqirha wakho unokucebisa i-11.25mg, eya kuthi ihlonywe kanye emva kweenyanga ezintathu. Abasetyhini abathatha i-leuprorelin ye-endometriosis kufuneka baqwalasele nokuya kunyango oluchasene neehomoni, olulungele ukunciphisa iimpawu ze-vasomotor kunye nokulahleka kwesinambuzane. Nangona kunjalo, ukuvavanya izibonelelo zonyango ngalunye kufuneka kunikezwe kuqala xa ukhetha inkqubo efanelekileyo yonyango.
I-Pediatric leuprorelin acetate yedosi yokufikisa eyiyo
Ukufikisa ngobunyani yimeko apho abantwana bahlakulela iimpawu zabantu abadala kwangaphambi kokuba kulindelwe. Xa ixesha lokufikisa liqala ngaphambi kobudala be-8 kumantombazana kunye ne-9 kumakhwenkwe, kuthathwa njengokuchanekileyo. Isimo sinokulawulwa ngokuthatha umthamo we-leuprorelin acetate. Nangona kunjalo, ubunzima bomntwana buza kumisela idosi efanelekileyo yokunyanga isifo. Ukwahlulwa kwethamo ngolu hlobo lulandelayo;
Ubunzima bomzimba obungaphantsi kwe-25kg idosi evunyiweyo yi-7.5mg inaliti kanye ngenyanga
Umntwana onobunzima be-25 ukuya kwi-37.5 kg kufuneka athathe idosi ye-11.25 kanye ngenyanga.
Kubantwana abangaphezulu kwe-37.5kg, idosi ephakanyisiweyo yi-15mg inaliti kanye ngenyanga.
Xa uthatha i-dosages yakho ye-Leuprolide powder, amanqanaba e-hormonal kufuneka ahlolwe emva kweenyanga ze-1 okanye ze-2 ukuqinisekisa ukuba kukho uxinzelelo lwe-gonadotropin eyaneleyo. Uvavanyo olwenziwa rhoqo lonyango luya kunceda ugqirha wakho ukuba aqwalasele inkqubela phambili yonyango kunye nokuhlangabezana nophuhliso olunokwenzeka ngexesha lokunyanga.
Khumbula, ugqirha wakho ungumntu ofanelekileyo ukuba amisele umthamo weLeuprorelin kubantu abadala kunye nabantwana emva kokuvavanya imeko yezempilo. Ngamanye amaxesha unokucetyiswa ukuba uqale ngeedosi ezisezantsi, ezinokulungiswa kunye nexesha emva kokujonga impendulo yakho yomzimba. I-Leuprolide acetate kunye nokukhulelwa akuvunyelwanga njengoko ichiza linokwenzakalisa umntwana ongekazalwa. Abasetyhini bayacetyiswa ukuba bangayithathi le peptide powder xa belindele okanye xa becwangcisa ukukhulelwa nangaliphi na ixesha kungekudala.
Kwiimeko ezininzi, xa usebenzisa kakubi okanye usela kakhulu nasiphi na isiyobisi, siyakukubhengeza kwiziphumo ezibi kakhulu; nangona kunjalo, amandla akho omzimba ngamanye amaxesha anokugqiba ubungakanani bempembelelo. Kwenzeka okufanayo xa ungalandeli imiyalelo yethamo ngelixa uthatha i-leuprorelin acetate. Isilumkiso seLeuprolide sinokuhluka ngokuxhomekeka kwizinto ezahlukeneyo, ezinje ngobunzima bomzimba kunye nonyamezelo lomzimba. Abanye abasebenzisi bafumana iziphumo ebezingalindelekanga nokuba bathathe inxaxheba kwi-leuprolide dosages ephantsi ngelixa abanye banokuthatha iidosi eziphezulu kwaye basazonwabela izibonelelo.
Kukho eziqhelekileyo iziphumo ze-leuprorelin acetate ezinokubakho phantse kuwo wonke umsebenzisi, kodwa ziyanyamalala kunye nexesha. Iziphumo ebezingalindelekanga ezinobungozi ziyingozi, kwaye nje ukuba uzive, kufuneka wazise ugqirha wakho kwangoko. Kwelinye icala, kukwakho neziphumo ebezingalindelekanga ezinokubakho onqabileyo ukuba ube nazo ngelixa uthatha i-leuprorelin powder. Iziphumo ebezingalindelekanga zezi zilandelayo;
(1) Iziphumo eziqhelekileyo ze-leuprorelin acetate
Iintlungu ezijikeleze indawo yenaliti
(2) Imiphumo emibi ye-leuprorelin acetate
Kwimeko apho ufumana le miphumela ilandelayo ujonge ukhathalelo lwezamayeza ngokukhawuleza okukhulu;
Ukuphefumla okungaqhelekanga okanye ngokukhawuleza
Ubuncinci okanye ukurhawuzelela iinyawo okanye izandla
Kukho iziphumo ebezingalindelekanga ezinxulumene nesiyobisi. Nangona kunjalo, ziqatha xa zisenzeka. Ke, kuya kufuneka wazise ugqirha wakho kwangoko phambi kokuba kubi. Ngamanye amaxesha zenzeka ngenxa yokugqithisa ngokweqile, okanye allergy kwaye zibandakanya;
Ukuphuma kwegazi lobufazi kakhulu kubasebenzisi basetyhini.
I-Leuprolide acetate kunye neswekileesesesinye esinye isiphumo esingaqhelekanga onokuthi ube naso. Eli chiza kuthiwa lonyusa umngcipheko wokuba nesifo seswekile.
Ukujula kwelizwi kubafazi
Ukuqukumbela, i-leuprorelin acetate iye yabonakalisa ukuba sisiyobisi esikhulu xa sisetyenziswe ngokuchanekileyo kwilizwe lezonyango. Kwangelo xesha, i-leuprolide acetate yokuthenga iyafumaneka kwikhemesti ekufutshane, kwaye unokwenza i-odolo yakho kwiivenkile ezahlukeneyo ze-Intanethi. Baninzi abavelisi be-leuprolide ye-acetate kunye nabathengisi kwimarike namhlanje, kodwa uhlala uqinisekisa ukuba wenza uphando lwakho ukufumana imveliso esemgangathweni ngexabiso elifanelekileyo. I leuprorelin acetate ixabiso yahlukile kumthengisi omnye, yiyo loo nto kufuneka wenze uphando olululo phambi kokuthenga iyeza. Nangona kunjalo, ungathathi umhlaza wamabele we-leuprorelin acetate ngaphambi kokufumana idosi efanelekileyo evela kugqirha.
Ingoma, G., Gao, H., & Yuan, Z. (2013). Iziphumo ze-leuprolide acetate ekusebenzeni kwe-ovarian emva kwe-cyclophosphamide-doxorubicin-chemotherapy esekwe kwi-premenopausal kwizigulana ezinomhlaza webele: iziphumo ezivela kwisigaba II solingo olucwangcisiweyo. I-oncology yonyango, 30(3), 667.
I-Köhler, G., Faustmann, TA, Gerlinger, C, Seitz, C., & Mueck, AO (2010). Idosi Ijenali yeLizwe yeGynecology kunye nee-Obstetrics, 108(1), 21-25.
Tunn, UW, Gruca, D., & Bacher, P. (2013). Iifomati ze-leuprorelin acetate yedepho yeenyanga ezintandathu kwi-advanced cancer cancer: Uvavanyo lwezonyango. Ungenelelo lweklinikhi ekwaluphaleni, 8, 457.
UJohnson, SR, Nolan, RC, Grant, MT, amaxabiso, GJ, Siafarikas, A., Bint, L., & Choong, CS (2012). Ukwenziwa kwethumba elingalunganga elinxulunyaniswa nonyango lwe-depot leuprorelin acetate kunyango lokufikisa olusebenzayo. Ijenali yonyango lwabantwana kunye nempilo yabantwana, 48(3), E136-E139.